Okuqukethwe kwakho kuphephile, kugodliwe, futhi akulokothi kusetshenziselwe ukwenza ngezifiso izikhangiso
I-Drive inikeza ukufinyelela okubethelwe nokuvikelekile kumafayela akho. Amafayela owabelwe askenwa ngokuqhubekayo futhi ayasuswa lapho kutholwa uhlelo olungayilungele ikhompyutha, ugaxekile, i-ransomware, noma ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi. Futhi i-Drive eye-cloud, okususa isidingo samafayela endawo futhi kunciphisa ubungozi kumadivayisi akho.
IDrayivu ihlangana kalula nokuthi Amadokhumenti, AmaSpredishithi, nokuthi Amaslayidi, ama-app e-cloud avumela ithimba lakho lisebenzisane ngempumelelo ngesikhathi sangempela. Dala futhi yabelana ngokuqukethwe nethimba lakho ngoSuku 1, ngaphandle kwesidingo sokuthutha usuka kumathuluzi akhona kakade.
Iya ku-Google Drayivu Dawuniloda IDrayivu yedeskithophu